1. Hab nololeed fadhiid ah
Xagaagan waxa aanu isku daynay in aanu dibadda joogno inta badan ee suurtogalka ah, laakiin dayrta waxa aanu socod yar ku soconaa. Cimiladu way sii xumaanaysaa, goor hore ayay madoobaanaysaa, cabsida faafitaankuna ma dhiirigeliso socodka. Inta badan hadda waxaan wali ku bixinaa shaqada, inta badan waxaan ku hor fadhinaa kombuyuutar, taas oo aan lahayn saamaynta ugu fiican ee caafimaadka Saddex qaybood oo cudud ah oo tijaabo ah oo la xakameynayo si loo tijaabiyo waxtarka iyo waxtarka waxtarka leh ee SMART Work & Life faragelinta si loo dhimo wakhtiga fadhiga ee maalinlaha ah ee shaqaalaha xafiiska: borotokoolka daraasadda. Tani waxay sidoo kale saamaysaa maqaarka qaab-nololeed fadhiid ah: Saamaynta caafimaadka: kuma filna ogsijiinta sidii la rabay mana hesho nafaqooyin kale oo qaddar sax ah. Haddii maqaarka qalalan iyo midab aan caafimaad qabin ay noqdeen saaxiibadaada joogtada ah, ka feker haddii hypodynamia ay sidoo kale saameynayso tan.
Maxaa la sameeyaa
Uma baahnid inaad isla markiiba iska diiwaan geliso jimicsiga, kaliya ku dar dhaqdhaqaaqa noloshaada. Ku raaxayso qoob ka ciyaarka guriga, ku soco beerta, ka bood wiishka, ama u soco hal joogsi si aad u shaqeyso. Waxa ugu muhiimsan waa in si joogto ah loo sameeyo.
2. Biyo adag
Quruxda iyo caafimaadkaba, nadaafadda iyo ka koobnaanta ma aha oo kaliya biyaha aad cabto ayaa muhiim u ah. Waxa kale oo muhiim ah nooca biyaha aad ku dhaqdo. Harsh, oo ay ku jirto milix badan, ma bixiso nadiifin habboon ama qoyaan waxayna si weyn u dhaawici kartaa LB1529. Soo-gaadhista soo noqnoqda ee biyaha adag iyo surfactant waxay wax u dhimaysaa horumarinta xannibaadda epidermis ee shaqada xannibaadda in vitro ee maqaarka. Haddii aad leedahay maqaarka xasaasiga ah, biyahani waxay xitaa keeni karaan cuncun iyo cuncun.
Haddii ay suurtogal tahay, ku maydh wejigaaga biyo la sifeeyay ama dhalada ah oo isticmaal waxyaalaha la isku qurxiyo oo leh maaddooyinka qoyaanka leh (hyaluronic acid, provitamin B5, vitamin E, allantoin, saliidda khudradda).
Viktoria Klishko ku takhasusay maqaarka-cosmetologist, khabiir Vichy.
Sida loo fahmo in biyuhu adag yihiin? Dhexdeeda, nadiifiyaha ayaa ka sii xumaan doona xumbo, ka dib habkan waxaad u badan tahay inaad dareemi doonto qalalan iyo maqaarka cidhiidhi ah.
Beddelka wanaagsan ayaa ah in aad isticmaasho xabadaha barafka (gaar ahaan shaaha geedaha la qaboojiyey) si aad wejigaaga u dhaqdo, marka lagu daro biyo la sifeeyay ama dhalada ah. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad ka taxadirto: isticmaalka xad dhaafka ah ee barafku wuxuu maqaarkaaga ka dhigi karaa mid engegan oo fuuqbaxay, gaar ahaan haddii uu hore u soo gaadhay qallayl. Waxa kale oo jira hab anhydrous ah, laakiin kuma habboona qof kasta. Xaaladdan oo kale, aad bay muhiim u tahay inaad doorato nadiifiye u dhigma nooca maqaarkaaga iyo baahiyahaaga. Khaasatan hadda, marka ay bannaanka qabowdahay oo ay kulushahay gudaha.
3. Hawo wasakhaysan
Haddii aadan ku noolayn tuulada alpine, waxay u badan tahay inaad dareento dhammaan cawaaqibta xaaladda deegaanka ee hadda jirta. Oo ma aha oo kaliya caafimaadka guud ahaan: maqaarka, kaas oo luminaya qoyaanka, jilicsanaanta, wuxuu ka cabanayaa midabka iyo xanaaqa, sidoo kale waxay la kulmaan saameyn xun. Qaybaha kala duwan ee wasakhowga hawada ee maqaarka, oo ay ku jiraan nitrogen dioxide, waxay dhaawici karaan unugyada, natiijaduna, waxay kicin kartaa gabowga maqaarka. Intaa waxaa dheer, wasakhowga hawada magaalada weyn waxay si fudud ugu dhammaanayaan maqaarkayaga. Natiijo ahaan, ballaarinta daloolka, korodhka wax soo saarka sebum iyo muuqaalka finanka.
Mar kasta oo aad guriga tagto, u bax gacmahaaga isla markiiba. Isla xeer ayaa khuseeya wejiga. Maalin kasta, malaayiin walxood oo walxaha waxyeelada leh ayaa lagu cunaa lakabka walxaha la isku qurxiyo ee korkiisa ah, oo xira daloolka waxayna burburiyaan lakabka difaaca ee maqaarka.
Cun cuntooyin ku filan antioksidanter (khudradda cusub, berry iyo miraha, iyo sidoo kale salmon, mackerel, shaaha, iyo shukulaatada madow) oo ha ilaawin waxyaalaha la isku qurxiyo ee fitamiinada E iyo C ee ka kooban.
Marar badan guriga hawo geli, ku seexo daaqadda oo fog haddii ay suurtogal tahay.
4. hurdo la'aan
Shaqada ugu weyn ee hurdada ee jirkeena guud ahaan waa nasasho iyo soo kabasho. Ma heleysid hurdo kugu filan, maqaarkaagu sidoo kale ma soo kabsado: shaqadeeda xannibaadda ayaa sii xumaanaysa, heerka qoyaanka ayaa hoos u dhacaya, iyo soo saarista sebum, liddi ku ah.
Nabarka indhaha hoostooda, maqaar caajis ah, fuuq-bax, saamaynta caadiga ah ee hurdo la'aanta Dulmar guud ee xanuunada hurdada ee caadiga ah iyo isgoysyada xaaladaha maqaarka. Intaa waxaa dheer, hurdo la'aantu waxay si xun u saamaysaa jirka guud ahaan, taas oo mustaqbalka dhow ay sii wadi doonto inay saameyn ku yeelato muuqaalkaaga.
Hurdo ugu yaraan 7-8 saacadood maalintii hana ballan qaadin inaad seexanayso maalmaha fasaxa ah: way adkaan doontaa in la qabsado. Isku day inaad sariirta seexato isku mar. Oo haddii aad ku safreyso shabakadaha bulshada isla sariirta waa caadadaada caadiga ah ka hor sariirta, iska dhaaf.
5. xidhashada waji-xidhka joogtada ah
Maaskaro-ka-hortagga, kuwaas oo si aad ah caan uga noqday dib-u-dhacii aafada COVID-19, waxay sababi karaan casaan, gubasho, maqaarka maqaarka iyadoo la isticmaalayo waqti dheer. Intaa waxaa dheer, maaskaro inta badan waxaa ku jira fiilooyinka propylene, taas oo kordhisa dareenka maqaarka. Haddii aad xidhato maaskarada wakhti dheer, wejigaaga ayaa dhididsan hoostiisa, oo khilaafku wuxuu keeni karaa xanaaq, xaaladaha qaarkood waxay xitaa keeni kartaa dermatitis.
Haddii aad aragtay saamaynta xidhashada maaskarada ee wejigaaga, u tag nadiifiyeyaasha khafiifka ah ee aadka u khafiifka ah ee aan udgoonka lahayn iyo kiriimyada dheehka leh ee aadka u kulul. Intaa waxaa dheer, alaabta quruxda leh ee lipids ee ka kooban: ceramides, kolestaroolka iyo asiidhyada dufanka leh (Omega 6- iyo 9-) ayaa kaa caawin doona xallinta dhibaatada. Ka fogow in muddo ah aasaas cufan oo joogto ah, kaas oo intaa dheer cuncun iyo engejin kara maqaarka.
Maaskarada ilaalinta, hoogay, uma roona maqaarka, laakiin saameynta xun waa la yareeyn karaa iyada oo loo mahadcelinayo sharciyada fudud.
Marka hore, ilaali nadaafadda wanaagsan. Tani waa wax iska cad, laakiin qof kastaa ma xasuusto: maaskarada la tuuri karo waa in lagu beddelaa mid cusub saddexdii saacadoodba mar, dib loo isticmaali karo, si joogto ah loo dhaqo. Way fiicantahay in la haysto dhawr waji-xidho si loogu beddelo inta jeer ee kuwa la tuuri karo.
Marka labaad, dooro waji-xidhaha kuwaas oo ugu dhib yar maqaarka. Kuwa ugu dhibka badan waa walxaha SMS-ka ee saddexda lakab ah. Waxay leedahay sifooyin nuugista sare leh mana ogola dareerayaasha, xeryahooda kiimikada, dufanka inay dhex maraan. Maaskaradan waxa kaliya oo lagu iibiyaa farmasiyada waxayna u diiwaan gashan yihiin waji-xidho caafimaad.
Marka saddexaad, haddii xanaaqa ama dhaawaca maqaarka uu ka soo muuqdo maaskarada, alaabada lagu soo celinayo epidermis waa in la isticmaalo. Tusaale ahaan, ku dawee dhaawaca alaabta leh panthenol ee ka kooban. Laakiin tan waa in la sameeyaa oo keliya haddii ay jiraan dhibaatooyin hore u jiray. Haddii maqaarku awood u yeesho inuu u adkaysto walbahaarka is-jiidhka, waxa fiican in lagu sameeyo daryeel jilicsan oo xoogga la saarayo ilaalinta iyo fuuq-celinta. U hubso inaad dhaqdo wejigaaga ka dib markaad xidhato maaskaro muddo dheer, adoo isticmaalaya iftiin, nadiifiye aan udgoon lahayn, oo ay ku xigto moisturize.
6. La'aanta alaabta daryeelka ee SPF
Haa, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho Dib-u-qiimaynta Saamaynta Kordhinta Maalinlaha ah ee Heerka Hoose ee Shucaaca Qorraxda UV xilliga qaboobaha, gaar ahaan haddii aad ku nooshahay latitudes koonfurta, halkaas oo ay qorraxdu noqon doonto waqti dheer. Xataa haddii cirku daruuro qariyo ama uu da'ayo, falaadhaha ayaa weli dhexda daruuraha. Intaa waxaa dheer, soo-gaadhista xad-dhaafka ah ee shucaaca kulaylka ( fallaadhaha infrared) iyo boodhka wanaagsan ayaa ah arrimo kale oo taban oo keena cuncun maqaarka iyo qallayl.
Ha iloobin kiriimyada qorraxda xitaa xaaladaha magaalooyinka iyo xitaa ka baxsan xilliga xagaaga. Kuwanuna maaha muraayadaha qorraxda ee fasaxa xeebta: badeecooyinka khafiifka ah, dareeraha, kiriimyada maalintii iyo emulsions ay ku jiraan spf ayaa kugu habboon adiga.
7. Heerkulka oo hoos u dhaca
Habka qaboobaha, qolka kulul, tartanka dhabta ah Saamaynta xilliga qaar ka mid ah guryaha maqaarka: Winter vs. xagaaga, sida ay la kulmeen 354 dumarka Shanghaiese ee da'da kala duwan ee maqaarka. Markaad qolka ka baxdo, xididdada dhiigga ee maqaarku waxay marka hore isku koobaan si ay u kululaadaan ka dibna balaadhaan, tani waa falcelin dabiici ah oo ku saabsan hoos u dhaca heerkulka. Muddo ka dib, maraakiibtu waxay ku soo noqdaan sidii hore, laakiin marar badan oo aad dibadda u baxdo, marar badan ayaa maqaarkaaga la kulma shoog dhab ah. Waxay luminaysaa awoodda ay u leedahay in ay si degdeg ah oo waxtar leh dib u soo kabsato, waxay nuugtaa nafaqeeyayaalka walxaha la isku qurxiyo si ka sii daran, bartinimadiisuna way sii xumaanaysaa.
Cimilada dabaysha iyo qabowga leh, waxa fiican in la isticmaalo waxyaalaha la isku qurxiyo ee ka hortagaya soo celinta difaaca dabiiciga ah ee maqaarka. Guriga, waa inaad gelisaa huurka oo aad la socotaa heerka qoyaanka (caadiga waa 30 ilaa 50%).
8. Daryeel xumo
Hawsha daryeelka isqurxintu waa in la qanciyo dhammaan baahiyaha maqaarka. Nasiib baad leedahay haddii alaabada khaldan ama hababka khaldan (tusaale, xoqid gardarro ah) ay yihiin kuwo aan faa'iido u lahayn iyada. Haddii kale, waxaad halis u tahay inaad macaamiil joogto ah u noqoto dhakhtarka maqaarka. Xasaasiyadda, xanaaqa, muuqaalka dhibcaha da'da ama bararka, cawaaqibka joogtada ah ee daryeelka aan habboonayn.
Ha illoobin tillaabooyinka aasaasiga ah ee daryeelka maqaarkaaga maalinlaha ah. Tani waa nadiifinta, toning, qoyaan, iyo haddii aad si joogto ah u isticmaasho qurxinta qurxinta, ka dibna sidoo kale ka-saarista qurxinta, ugu horreeya ee liiska. Ha isticmaalin alaabada uu maqaarkaagu si xun uga falceliyo: hubaal lama qabsan doono. Haddii aadan si macquul ah u fahmi karin waxyaabaha la isku qurxiyo ee kugu habboon, waxaa fiican inaad la tashato takhasusle. Waxay go'aamin doonaan nooca maqaarkaaga waxayna kaa caawin doonaan xulashada alaabta la isku qurxiyo, sidoo kale waxay kuu sheegi doonaan sida saxda ah ee loo isticmaalo.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 8 cadaw ee quruxda oo ay tahay in gabadh walba ay ogaato!